Isikhucululi Sesandla, Sula Igciwane - Zhongrong
Singanikezela Ngomkhiqizo Njengo:
I-sanitizer yesandla; 75% Utshwala Obulala Amagciwane; Sula Utshwala; Okubunjiweyo Kwamakhemikhali (i-Ethanol ne-Ethyl Acetate)
Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 sigxile embonini yokubulala amagciwane ngokususelwa ku-R & D, ukwenziwa nokumaketha, sethula i-brand TECH-BIO, futhi sizimisele ukuyenza njengophawu lokuqala lomkhakha wokubulala amagciwane eChina ngoba sinekhwalithi ephezulu yotshwala eyenziwe isitshalo sethu.
I-TECH-BIO hand sanitizer kanye ne-disinfectant ingasetshenziswa kabanzi kuzo zonke izindawo zomphakathi njengekhemisi, izitolo ezinkulu, isibhedlela, amahhotela, isikole, njll kanye nomndeni ngokunjalo. Imikhiqizo yethu yamakhemikhali eluhlaza: i-ethyl ethanol ne-ethyl acetate ingasetshenziselwa isitshalo semithi, imboni yamakhemikhali emihle, njll.
I-TECH-BIO hand sanitizer ne-disinfectant zombili ziqukethe izithako ezisebenzayo ezingama-75% zotshwala ezingabulala amagciwane ajwayelekile kakhulu angama-99.99% kanye ne-covid-19 ukuqapha impilo yethu. Imikhiqizo yethu ingezwe izithako ezikhethekile eziswakanyisiwe ukuze kungalimazi ezandleni zethu. Sizohlinzeka njalo imikhiqizo engcono futhi engcono yokuvikela amaklayenti womhlaba wonke.
IZhongrong Technology Corporation Ltd (ikhodi yamasheya: 836455), yasungulwa ngo-1999 okungenye yamabhizinisi amaShayina Kazwelonke Asezingeni Eliphakeme agxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-ethanol engeyona okusanhlamvu nemikhiqizo yayo esezansi. Ingumkhiqizi omkhulu we-ethanol ongekho okusanhlamvu eChina, nomkhiqizi omkhulu we-acetate eNyakatho yeChina naseNyakatho-Mpumalanga yeChina.